Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Woyanaha oo ku guuldareystay ardeyda Ethiopia in balanqaad ku gattaan
Taliska Woyanaha oo ku guuldareystay ardeyda Ethiopia in balanqaad ku gattaan
Posted by ONA Admin	/ July 29, 2013
Collegeka Civil service oo ah heer jaamacadeed ayaa waxaa lagu soo xareeyay ardey kor u dhaafaysa 800 oo ardey oo laga soo aruuriyay jaamacadaha kalagadisan ee ku yaala Ethiopia iyada oo halkaas taliska sare ee Woyanuhu siminaaro kusiinayaan ardeydaas. Ujeedada barnaamijkan ayaa ah in gumeysiga Ethiopia uu ardeyda jaamacada Ethiopia oo laga cabsanayo inay kacdoonka siyaasdeed qeybta ugu weyn kaga jiraan in laga dhex sameeyo dhalinyaro kacaan ah oo u adeegta danaha gumeysiga Woyanaha.
Civilserviceka ayaa ah goob jaamacad ahaan oo kale ah oo lagu xareeyo dhalinyarada Ethiopia si loobaro nidaamka gumeysiga Woyanuhu uu ku maamulo wadanka Ethiopia. barnaamijka jaamacadan oo loogutalo galay Heer Kilil, waxaa maanta kililada Ethiopia oo dhan maamulka jooga ay kasoo wada baxeen civilserviceka, waana dad kaadir nidaam siyaasadeedka woyanaha lasoo cabsiiyay inaksto oo ay jiraan dad badan oo ka faa ideystay hadana u jeedada kowaad ee woyanuhu waxa ay aheyd inay dad ka dhex hesho u adeega nidaamka Woyanaha kuwaasna ay ka shaqaaleyso heer kilil illaa heer federal.
Hadaba ujeedada dhalinyarada Jaamacada Ethiopia loogu soo xareeyay siminaarada civil collegku maxuu yahay mudo ku dhow 20 cisho.
Dhalinyarada Jaamacadaha Ethiopia ayaa sheegay inaysan gadan doonin mala awaalka Woyanaha. dhalinyaro kamid ah Jaamacada Addis Ababa ayaa sheegay in ay kamid ahaayeen dadkii ka qeyb galay siminaarkan waxyaalaha lanoo sharxayay waxaa kamid ahaa
Sababta dhulka Ethiopia looga gadayo Shirkadaha Shisheeye.
Sababta Biye xidheenka Wabiga Abbay loo sameeyay
Sababta loo xidh xidho Suxufiyiinta Ethiopia iyo siyaasiyiinta Ethiopia
Siyaasada taliska Woyanaha ayaa looga hadlayay cid ka doodi karta oo talo ka bixin kartana maysan jirin waxii lanoo sheegayay waxay aheyd wax aan la dhageysan karin oo iskawada hor imanaya. Horumar ayaan wadanka u sameynayna shacabkiisana waan xasuuqayna siyaasad dad aqoon leh waliba dhalinyaro wadaniyiin ah laga dhaahdicin karo maahan.
Wiil dhalinyaro ah oo magaciisa Zar kusoo koobay oo kasoo jeeda qowmiyada Oromiya ayaa ONA u sheegay in shacabka Ethiopia ay jecelyihiin in wabiga Abbay rabitaankooda ku maamushaan, laakin shacabka Ethiopia ma taageersana qorshahan Woyanuhu u dajiyay ee larabo in lagu dulleeyo bulshada Ethiopia. waayo lacagta laga helo waxaa lagu xasuuqii doona shacabka Ogadeniya, oromada.
Taliska Woyanuhu waxuu meesha nooga aqriyay in malaayin ardey ah oo qalin jabin doonta shaqooyin laga siin doona mashruucyada ay horumarinta Ethiopia ku sheegeen…
Gumeysiga Ethiopia haduu daacad ka yahay arrintan oo uu rabo in wadanka Ethiopia lagu hormariyo biyo xidheenka Abbay, Maxay shacabka Omo river u bara kiciyeen, oo wax la xidhay iyo wax gaajo u dhintay looga dhigay, Dhulka Gambellaha maxaa shirkado shisheeye loosiiyay, shacabka maxaa loo xasuuqaya.
Dabcan ardeyda waxay rabaan inay balan qaad been ah usameeyaan kadibna ay ku adeegtaan si jaamcadaha Ethiopia kacdoonka ka scda u yaraado.
Waxa meesha lanagusoobaray in Ethiopia Demoqraadiyad kajirin, qofkii ka horyimadana meel khatar ah uu ku danbeyn doono.
Abbay Sahay Waxa uu kahadlayay oo dhan waxay ahayd hanjabaado loojeedinayo ardeyda jaamacadaha Ethiopia oo ah mustaqbalka Ethiopia. Woyanuhu cabsida ugu badan waxay ka qabaan waa ardeyda Ethiopia, marka inay dad ku dhex lahaadaan oo ardeyda lakala qeybiyo ayay rabaan midaas laakin mid noo cuntanta maahan ayuu yiri ardeygan magaciisa kusoo koobay Zar.